UNICEF Myanmar: October 2016
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကလေးငယ်များ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်ရာမဖြစ်စေဘဲ မိသားစုနှင့်အတူ ရှိစေခြင်း
ယူနီဆက်ဖ် အရှေ့အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသအတွက် ဒေသဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေး ကျွမ်းကျင်သူ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ မြို့လယ်ကနေ မြစ်ကိုဖြတ်ပြီး တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ ဒလရဲ့ ကျေးရွာတစ်ရွာကို ဖယ်ရီသင်္ဘောတစ်စီးက မိနစ် ၂၀ တစ်ခါ ပုံမှန်သွားပါတယ်။ မကြာသေးမီ မနက်ခင်းတစ်ခုက ယင်းသင်္ဘောပေါ်မှာ မြန်မာလုံခြည်တွေ ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ရုံးသွားရုံးလာတွေ၊ ငုံးဥ/ကြက်ဥပြုတ်နဲ့ စီးကရက်တွေရောင်းနေတဲ့ ခေါင်းရွက်ဗြက်ထိုးဈေးသည်တွေနဲ့ စွန့်စွန့်စားစား သွားလာကြတဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား လက်တစ်ဆုပ်စာတို့နဲ့ ဖယ်ရီက ပြည့်နေတယ်။
မိဘမဲ့ဂေဟာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း နေရာတစ်ခုဖြစ်သည့် ဒလရှိ လယ်ကွင်းများကို ဖြတ်လျှောက်နေသော ကလေးငယ်များ
Labels: cyclone Nargis, Dala township, keeping families together, orphanage, UNICEF Myanmar, Yangon
The time is right - perspectives on language dialogue from Kachin
By Deirdre Naughton, Education Communications
Kachin State, September 2016 - Daw L Ja Aung Lu teaches grade one pupils in Mogaung Township, Kachin State. Her day begins even before the pupils make their way through the school gate and into their classrooms. She reviews her planning notes, reminding herself of her teaching content for the day, and mentally revises the language she will use with her diverse group of pupils. ﻿
Daw L Ja Aung Lu (left) with some of her fellow teachers
©UNICEF Myanmar/ Deirdre Naughton/2016
မောင်းတော၊ ရခိုင် - ကိုထွန်းအေးမှာ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကျသော်လည်း စိတ်ဓာတ်မကျခဲ့ပေ။ တခြား ရွေးချယ်စရာ လမ်းရှိသည်ဟု အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် ကိုထွန်းအေးက ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
“ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကို မဖြေသေးဘဲ ခဏရပ်ထားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒီကြားထဲမှာ တခြားသူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ကူညီပေးချင်တယ်။ အဲဒီအချိန်ကတည်းက ကျွန်တော် မောင်းတောဆေးရုံမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ လူနာဝင်ခွင့်နဲ့ ဆေးထိုးခြင်း စီမံရေးကို ကူညီပေးတယ်။ ကျွန်တော့်ရွာမှာတော့ အနာရောဂါ အသေးအဖွဲတွေနဲ့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မလိုတဲ့ ဆေးတွေအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။﻿
ပိုလီယိုဆေးတိုက်ကျွေးရန် မရှမ်း၏အိမ်သို့သွားသော ကိုထွန်းအေးကို တွေ့ရစဉ်။
Labels: child’s health, Immunization, maungdaw, Polio, Rakhine, UNICEF Myanmar
Maungdaw, Rakhine- Htun Aye failed his matriculation exam but that didn’t demotivate him. The 21 year-old decided he would choose another way. “I decided to postpone the matriculation exam. In the meantime, I wanted to help other people, by improving their health and wellbeing”, he recalls. “Since then, I have been working in Maungdaw township hospital, helping with the patient admission process and injections administration. Back at my village, I take care of small wounds and non-prescription medicines.” ﻿
Htun Aye visited Ma Shan's house in the different phases of the polio campaign ©UNICEF Myanmar/2016/Mariana Palavra
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူမှုလုပ်ငန်းတွင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်ခဲ့သည့် ဒီဇိုင်းနှင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း
မော်လမြိုင်၊ မွန်ပြည်နယ် - လူမှုဖူလုံရေးဌာန (DSW) တွင် အုပ်ချုပ်မှုအလုပ်ကို ၂၉ နှစ်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သည့်နောက် အသက် ၄၉ နှစ်အရွယ် ဒေါ်စောဥမ္မာမှာ လူမှုဝန်ထမ်းတစ်ဦးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖားအံမြို့မှ မော်လမြိုင်မြို့သို့ စေလွှတ်ခံခဲ့ရသည်။ မော်လမြိုင်သို့ ရောက်ပြီး မကြာခင်တွင် အိမ်ကထွက်ပြေးပြီး ဘတ်စ်ကားဂိတ်တွင် လမ်းပျောက်ကာ ယောင်လည်လည်ဖြစ်နေသည့် အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးကို စောင့်ရှောက်ပေးရန် ည ၈ နာရီတွင် ဆင့်ခေါ်ခံရသည်။
“ကျွန်မ နှစ်ပေါင်း ၃၀ နီးပါး NGO တွေနဲ့ အဆက်အစပ်မရှိခဲ့ဘူး။ အုပ်ချုပ်မှုအလုပ်ပဲ လုပ်ခဲ့တာ။ အလုပ် သစ်မှာ သင်စရာတွေက အများကြီးပဲ။ ဒီအသက်အရွယ်ကျမှ တစ်ခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ အတွေအကြုံသစ်တွေ ရပြီး ဆက်တိုက်ကို သင်ယူနေရတယ်။ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ မျက်စိကို အမြဲတမ်း ဖွင့်ထားရတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောပြသည်။
မွန်ပြည်နယ်ရှိ ကလေးတစ်ယောက်ဆီသွားနေသော လူမှုရေးရာ ဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲသူ ဒေါ်စောဥမ္မာ
The first ever situation analysis in Myanmar to provideasystematic understanding of the experiences of children with disabilities and their families was launched by the Department of Social Welfare, Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement, in collaboration with UNICEF.